Maamulayaasha safarka ayaa rajo ka qaba soo kabashada safarka 2022
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Maamulayaasha safarka ayaa rajo ka qaba soo kabashada safarka 2022
Aad bay u wanaagsan tahay in rajooyinkan oo kale laga arko warshadaha safarka ee caalamiga ah iyadoo ay u muuqato inay ka soo kabato saameynta Covid-19.
Afar ka mid ah tobankiiba toban-kiiba khubarada sare ee safarka waxay u maleynayaan in 2022 tirooyinka diiwaan gelinta ee warshadaha oo dhan ay la mid noqon doonaan ama dhaafi doonaan heerarka 2019, ayaa daaha ka qaaday cilmi baaris ay maanta (Isniin 1 Noofambar) soo saartay WTM London.
Ku dhawaad ​​​​700 oo xirfadlayaal sare ah oo ka kala yimid daafaha adduunka ayaa gacan ka geystay Warbixinta Warshadaha WTM waxayna daaha ka qaadeen rajada wanaagsan ee 2022, marka loo eego kaliya maaha warshadaha ballaaran laakiin sidoo kale ganacsigooda.
Markii la waydiiyo, 26% waxay ku kalsoon yihiin in diiwaan-gelinta warshadaha ee 2022 ay la mid noqon doonto 2019, iyadoo 14% ay filayaan 2022 inay ka fiicnaadaan sannadkii hore ee caadiga ahaa ka hor inta uusan dillaacin COVID-19 bilowga 2020.
Markii wax laga waydiiyay waxqabadkooda ganacsi, xirfadlayaashu si isku mid ah ayay yididiilo u qabeen, iyada oo 28% ay filayaan in ballan-qaadku ku habboon yahay 2019, iyadoo 16% ay filayaan koror.
Si kastaba ha noqotee, qof kastaa ma filayo inuu soo kabsado 2022. Ku dhawaad ​​kala badh muunada (48%) waxay u maleynayaan in warshaduhu hoos u dhici doonaan 2019, iyadoo 11% aan la hubin. Iyo qaar ka mid ah ganacsiyada gaarka ah, 2022 waxay noqon doontaa halgan, iyadoo 42% ay qirteen in ballan-qaadyadu aanay u badnayn inay u dhigmaan 2019. 14% oo dheeraad ah ayaan hubin sida 2022 uu u dhammaan doono.
Simon Press, Agaasimaha Bandhigga, WTM London, ayaa yiri: "Waa wax aad u wanaagsan in rajooyinkan oo kale laga arko warshadaha safarka ee caalamiga ah iyadoo ay u muuqato inay ka soo kabato saameynta Covid-19. Warshaduhu waxay toddobaadkan isugu yimaadaan WTM London si ay u heshiiyaan heshiisyo ganacsi oo qaabayn doona mustaqbalka socdaalka iyo dalxiiska caalamiga ah. "